MNa na Magdolna
MNa na Magdolna, omee, onye ọbụ abụ
MNa na Magdolna, aha zuru okeBritney Jean Spears(* 2. 1981 December McComb, Mississippi, USA) bụ American pop ọbụ abụ, malite nke Grammy na MTV Video Music Awards, songwriter na omee. Kasị ghọrọ mara maka songs "... Baby One More Time", "Oops! ... I Ndi ya ọzọ", "Nsí Achọ", "Gimme More," "achụ nwaanyị," "Ibe nke Me", "Jide Ọ Against Me" "ruo Ụwa nsọtụ", mba song "Chịa & Tie mkpu" American rapper Will.i.am na-abụ abụ soundtrack na film na Smurfs 2.
Ọ malitere na telivishọn na New Mickey Mouse Club dị ka nwa okorobịa, afọ ise mgbe ihe ngosi a na 1998, ọ gara ọrụ ọbụ abụ na-abụ abụ.
Ndị na-akwado mgbasa ozi, bụ ndị a ma ama maka azụmahịa Pepsi ya, nwere mmasị na ya nke ọma, na-emepụta fim nke Crossroads na ihe ngosi ya bụ Britney & Kevin: Chaotic. Ruo afọ anọ ya na Justin Timberlake bụ onye ọbụ abụ nọ. Na 2004, ọ lụrụ Kevin Federlin, bụ onye gbara alụkwaghịm afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị, ya na ụmụ nwoke abụọ bụ Sean Preston na Jayden James (2005, 2006). Na Jenụwarị 2013 gbaghaara Jason Trawick na-achọ ịlụ, ma n'ime otu ọnwa, ọ malitere n'ihu ọha na enyi ọhụrụ, 4 maka David Lucad dị afọ ole na ole. Ná ngwụsị nke December 2013 malitere itinye aka ya na afọ abụọ na Las Vegas.
A mụrụ ya na McComb, Mississippi, mana o toro na Kentwood, Lousiana. Nna ya, James Parnell Spears, bụ onye na-ewu ụlọ na nne Lynne Irene Bridges, onye nkụzi ụlọ akwụkwọ praịmarị. O nwere ụmụnne nwoke abụọ, nwanne Bryan (a mụrụ 1977), na-eme otu n'ime ndị ọrụ ya, na nwanne nwanyị Jamie Lynn (a mụrụ 1991).
Ọ na-asọ mpi n'ụlọ mgbakọ ahụ, merie ọtụtụ asọmpi. Ọ na-arụ ọrụ n'egwuregwu egwú. Mgbe ọ dị afọ asatọ, onye ụkọchukwu nke Chọọchị Baptist dị n'ógbè ahụ gwara ya ka ọ nyochaa maka Mickey Mouse Club. Ọ bụ ezie na ọ ka bụ nwata, onye ọrụ New York hụrụ ya. Ọ gara ụlọ akwụkwọ ịgba egwú na New York ma rụọ ọrụ na telivishọn n'ọtụtụ mgbasa ozi na-abụghị nke azụmahịa.
Mgbe e mesịrị, e kwetara ya na Mickey Mouse Club wee rụọ ọrụ na 1993-1994. O zutere ndị ọkachamara oge ochie dị ka Justin Timberlake, Joshua Chasez, Keri Russell, Christina Aguilera, ma ọ bụ Ryan Gosling.
Ọrụ 1997-2000 na-amalite: Nkwekọrịta ya na ndekọ ndekọ Jive, ...Oge Otu Onye Na-agafekaOops ...! Emere m ya ọzọ
Na 1997, Britney bịanyere aka n'akwụkwọ ndekọ Jive ya mgbe ọ nụsịrị olu ngosi ya nke "M ga-ahụ gị n'anya mgbe nile," nke Whitney Houston dere, bụ nke ọ zitere. Mgbe ọ bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ahụ, Britney ji nwayọọ nwayọọ malite ịkwadebe ihe ndekọ ahụ ma gbasaa olu ya na onye nchịkwa olu. Ka ọ dị ugbu a, o deela ọtụtụ ngosi ngosi ndị e mepụtara na CD ma ọ bụ Oops ...! ... I Did It Again. Mbido mbụ malitere ịbụ abụ a na-akpọ... Baby One More Time, nke malitere igosi na redio na MTV na 1998. Ọ ka na-acha uhie uhie na isi uwe ya. Abụ a na-aga nke ọma n'ụwa nile. Ihe odide nke eserese ndị ahụ abughi naanị na United States, kamakwa n'Australia na UK. The album nke otu aha dị na Canada na US na n'elu nke chaatị maka oge na-aga n'ihu nke izu isii. N'ime otu afọ, ọ ghọrọ nwa agbọghọ kasị nwee afọ ojuju n'ime akụkọ ihe mere eme. Alba... Baby One More TimeEresị n'ụwa niile site na 35 nde iberibe.
N'April, 1999 rutere n'ihu akwụkwọ magazin ahụRolling Stone.Images na nke ọkọnọ onwe ya dị ka Lolita, kpasuru ọgba aghara, n'ihi na ha O doro anya na ibu ara karịa na ihe ndị ọzọ, nke jupụtara ntule banyere ọkọdọhọ plastic ịwa ahụ o nwere na-ata tupu dí ndu a nkiriMgbe ụfọdụ,. Enwetala nkwenye ndị a.
Maka album... Baby One More Timeenye ama enyene ediwak enọ onyụn̄ okodụk ke utịp1999 Billboard Music Awardsndị a họpụtara ahọpụta nke afọ.N'ọnwa Disemba, ọ natara Billboard Music Awards, onyinye American Music, na nke ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, 2000 nwetara Grammy Awards abụọ na February.
Mgbe emechara njem ahụ a na-akpọCrazy 2K Tourweputara CD nke abuoOops! ... I Did It AgainỌ nabatara n'elu nke sụgharịrị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe nile n'ụwa. Nanị n'izu mbụ na album USA a na-ere ihe karịrị 1,3 nde ego, ma ghọọ onye na-ere ahịa kachasị nke onye ọbụ abụ oge niile.N'afọ ahụ, 2000 rere ngụkọta nke 10 nde nkeji na United States, 900 000 na-ebuga na UK na nde million na Germany 1,2. AlbaOops! ... I Did It Againeresị n'ụwa nile site na 24 nde nkeji.
Na 2000, ya na nne ya bipụtara akwụkwọ mbụ ya, nke e bipụtara n'okpuru aha anyịSite n'obi ruo n'obi. O emeriwo ọtụtụ MTV Awards, ebe ọ malitere ịkọwa arụmọrụ ya, bụ nke ọ na-emebu.N'okpuru album nke abụọ ọ nwetara ọkwa Grammy abụọ na Best Pop Albums na Best Pop Songs.
2001-2003MNa na, Ụzọ aNa mpaghara
Britney Spears na-akpọ m megide egwu (NFL Kickoff Live 2003)
Ná mmalite nke afọ, 2001 banyere akwụkwọ mgbasa ozi na Pepsi, nke 8 natara ọtụtụ nde dollar.O bipụtara akwụkwọ nke abụọ yaOnyinye nneọ na-enwekwa mmasị na arụmọrụ ya na MTV Video Music Awards, na-egwupụta ite dị sie ike, nke katọrọ PETA.
Na November, o wepụtara ya album nke atọ, nke a kpọrọ yaMNa na. N'ime izu mbụ, ọ rere karịa 746 000 ibe.Ọ bụ ezie na e nwere ihe karịrị 4 nde e rere na US, ọ bụ nnukwu dobe tụnyere mbadamba abụọ mbụ.The album bụ onye mbụ na-abụ ma onye edemede na onye mmepụta.Ndekọ ụwa dumMNa narere puku 15 nde.
Na February 2002 gara kiriata mbụ nke nkiri nkiri ahụ ebe ọ na-akpọ, kpọrọOkporo ụzọ, nke dị na ngwụsị izu mbụ mgbe ọ na-etinye nke abụọ na-abịa, mana ma jiri nwayọọ nwayọọ daa. Na fim ahụ, egwu sitere na album ahụ pụtaraMNa na. N'ikpeazụ, a katọrọ fim ahụ maka ndị nkatọ ahụ, ọbụnakwa natara Golden Rasberi maka onye omekome kasị njọ na Madonna. Ihe nkiri ahụ meriri Golden Rape maka abụ kasị njọ maka fim ahụ,Adịghị m nwa agbọghọ, ọ bụghị ma nwanyị, nke ọ nwetara.
Mmekọrịta afọ anọ na Justin Timberlake kwụsịrị 2002 na March. A na-akpọsa òkè ahụ n'ihu ọha ma na-ebo ya ebubo na ebubo na-ekwesịghị ntụkwasị obi.E nwetara nkọwa mgbe Timberlake wepụtara abụNa-eti M na Osimiri, ebe ọ na-abụ abụ banyere ekwesịghị ntụkwasị obi nke onye òtù ọlụlụ ya. Okwu ọnụ kwuru, sị:"Ọ bụ afọ abụọ nke mmekọrịta, M n'aka na ọ bụ, onye ziri ezi, ma m na-ezighị ezi."
N'ọnwa June, 2002 mepere ụlọ oriri na ọṅụṅụ NYLA na New York, ma mechibidoro ya mgbe otu afọ gasịrị. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị nkatọ kwubiri na mmetụta ya na ụwa egwu adawo, ọ bụ ọbaMNa naahọrọ maka onyinye onyinye Grammy. Na magazin mara ọkwa maka afọ 2003Forbesonye amara nke afo.Na egwú ọ bịara azụ mgbe a ogologo oge ruo mgbe August, mgbe 2003 enọ MTV Video Music Awards, ebe ọ rụrụ ọnụ na arụsị ya Madonna na Christina Aguilera. Tinyere Aguilera, Madonna ama amaDị ka nwa agbọghọ. A na-eme ka arụ ọrụ ahụ site na crackdown, ka ọ susuru Madonna na ya.
Na November, 2003 tọhapụrụ ya akwụkwọ anọ nke studio a na-akpọNa mpaghara. Max Martin nyeere ya aka ruo ogologo oge, mana ndị dike dịka Moby ma ọ bụ R. Kelly nyekwara ya aka. Edere album ahụ dum (13 Songs) maka oge mbụ ya. The album bụ ọzọ na top nke US album ndepụta, rewriting music akụkọ ihe mere eme - niile albums mbụ.Na izu mbụ, a na-ere 609 000 nkeji, ngụkọta nke karịrị nde 3 rere na United States. Mgbe ogologo oge gasịrị, o nwere onye na-agụ egwú kacha elu nke 10 na chaatị USA, egwu nke a na-akpọ Toxic, bụ nke ọ natara Grammy Award mbụ ya.AlbaNa mpagharan'elu ụwa erewo ihe karịrị 10 nde iberibe.
Onye nke atọ n'ime album ahụ na-aga nke ọmaNa Mpagharana ahaKwa oge. Mgbe e wepụrụ abụ a, ọ gara njem nleta zuru ụwa ọnụOnyx Hotel Tour, nke hụrụ ihe karịrị 600 000 Fans ma nweta 34 nde dollar. A na-eme egwuregwu ahụ na North America nakwa na Europe, ebe ọ na-emezughị ya, n'ihi na ikpere ya merụrụ ahụ otu izu tupu mmalite nke njem na-agbapụ egwu egwuIwe.
3. January 2004 lụrụ Jason Allan Alexander nwa okorobịa. Agbamakwụkwọ ahụ mere na obere ụlọ ụka dị na Las Vegas. Ọ na-eyi akwa jeans na okpu baseball. N'ụlọ ọrụ nke ezinụlọ ya na njikwa bụ 5 alụmdi na nwunye. January kagburu. O were oge 55 zuru. Na arịrịọ maka nkwụsị, o kwuru na ọ ghọtaghị na ọnọdụ ahụ dị njọ nakwa na ọ bụ naanị egwuregwu na-agafe ókè. Ya na Alegzanda enweghị ihe omume ntụrụndụ ọ bụla, ya enweghị ike iche na ya na ya ga - eso ụlọ ma ọ bụ inwe ụmụ. N'ikpeazụ, o kwuru n'otu ihe ngosi telivishọn:"N'ikwu eziokwu, Achọrọ m ịma ihe ọ dị ka ị lụrụ."
Na July, 2004 kwupụtara mmekọrịta ya na onye ịgba egwu Kevin Federlin ọnwa atọ mgbe ọ ghọchara otu ụlọ ọrụ Hollywood. Ọ ghọtaghị ebe Federline lụrụ di na nwunye Shar Jackson ma nwee ụmụ abụọ. Ma, na Federlin n'abalị 18. September 2004 kwụsịrị.
2004-2006 Alụmdi na nwunye, nwa mbụ naNke kachasị mma
Na ọkara nke abụọ nke afọ, 2004 kwupụtara mmebi nke ọrụ egwu n'ihi ịbụ nne.N'ọnwa mgbe alụmdi na nwunye ahụ na Federlin gasịrị, ọ gwara magazin ahụndị mmadụ "Achọrọ m ịbụ nne na-eto eto, n'afọ ọzọ m ga-abụ 23 ma chọọ m ịbụ nne m."N'agbanyeghị nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ nwere mkpado "Britney" gara n'ihu, na September 2004 wepụrụ mmanụ mbụ ya bụ Curious. Mgbe otu afọ erere, 100 nwetara ọtụtụ nde dollar ma ghọọ mmanụ na-ere ahịa kachasị mma.
Nchịkọta nke mbụ a kpọrọ ahaNke kachasị mma: My Prerogativenyere na njedebe nke afọ 2004. Akwukwo egwu a na-agba na ebe nke anọ na listi akuko US (onu ahia ala ma obu n'ihi nkwenye).Na izu mbụ, albums dị na United States na-ere ihe karịrị 255 000 ibe. Na UK, a na-ere 115 000 n'izu mbụ, ahịa zuru oke nke nnakọta ndị yiri ya dị ka Madonna, Shania Twain, ma ọ bụ Whitney Houston. Mmadụ atọ dị ọhụrụ na-apụta na nhọrọ, n'etiti ndị ọzọMy PregativegativekaMee Oge '. Mpịakọta ndị e mesịrị ree ihe niile na 8 nde ego.
N'oge 2005, o gosiri di ya ihe ngosiBritney & Kevin: Chaotic. Otú ọ dị, ndị nkatọ na-egbu ya n'enweghị obi ebere, ndị na-ege ntị adịghịkwa atụ anya ya.
N'ime afọ iri na ise, onye na-ekwuchitere ya na April 2005,ọnwa a, a na-ele ya n'ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ. O mesịrị kọwaa magazin ahụndị mmadụ:"M na-agba ọbara obere, ọ ghaghị ịdị na-elekọta m mgbe niile."N'agbanyeghị ọchịchọ ya, nwa ahụ ekwetawo magazin ọzọElle "Ana m aga mpaghara Caesarean, amaghị m ihe kpatara ya, mana n'ihi na m na-atụ egwu ihe mgbu."14. September 2005 na nwa ya nwoke bụ Sean Preston mụrụ Federlin. Ịmụ nwa ga-agba ọsọ ruo ụbọchị na-esote, ma mmechi ahụ bịara na mbụ. Di ya jidere aka ya n'oge ọrụ ya. Ka oge na-aga, e zigara ya na VIP Maternity Ward na Santa Monica.
Mgbe amuchara nwa mbu, oru egwu ya emeghi ihe ohuru. Ụlọ obibi akwụkwọ ya wepụtara otu ọba egwu egwu a kpọrọB na Mix: The Remixesna na February 2006 wepụtara mmanụ ísì ọhụrụ nke a na-akpọ Na Control.
Na May, 2006 kwupụtara ime afọ abụọ, kwupụtara n'ihu ọha banyere ịkọ nkọ banyere mmalite nke alụmdi na nwunye ya, nke ọ gọrọ agọ, ma n'otu oge ahụ ọ kwadoro na ọba ọhụụ ahụ ga-abụ onye ofufe na mbụ naanị otu afọ.12. A mụrụ September 2006 nwa ya nke abụọ, Jayden James. N'ihe na-erughị ọnwa abụọ mgbe a mụsịrị ya, ọ rịọrọ maka ịgba alụkwaghịm maka esemokwu dị iche iche a na-apụghị ịgbagha agbagha ma n'otu oge ahụ rịọrọ maka njide nke ụmụ abụọ ahụ.
2006-2007 Ịgba alụkwaghịm ablackout
26. 2007, nwanne nne ya, bụ Sandra Bridges Covington, nwụrụ n'ihi ọrịa cancer.16. N'ọnwa izu nke February mgbe a na-akpagbu paparazzi, oriri na ịṅụ mmanya na-aba n'anya kpebiri ịmalite ịṅụ ọgwụ ọjọọ. Oge 24 akwụsịghị ọbụna n'ụlọ ọgwụna ehihie na-esote ọ pụtara n'ahịrị na-edozi isi na Malibu, ebe ọ jụrụ ịkpụ ntutu isi ya. Ọ bụ ya mere o ji buru isi ya wee belata onwe ya. Mgbe ahụ, ọ gara kpọmkwem ebe a na-egbu egbugbu ebe ọ na-egbu egbu. Ndịàmà kwuru na ọ sịrị:"Unu emetụla m aka. Enwere m ndị niile metụrụ m aka gburugburu. "Isi ntutu ya, tinyere Red Bull agụghị akwụkwọ, mpe ọkụ na isi aka ya, weere na ịntanetị maka ire ere.
20. Na February, 2007 kpebiri ịlaghachi na ọgwụgwọ ma gwa ndị nta akụkọ na ọha na eze ka ha hapụ ya ma sọpụrụ onwe ha. Ọ naghị eme na mgbe paparazzi chọtara ebe obibi ya, o kpebiri ịkwụsị ọgwụgwọ ọzọ. Ọ kwụsịrị otu ụbọchị n'ụlọ ọgwụ.
21. Febụwarị, 2007, e nyere ụmụ abụọ n'aka Kevin Federlin. N'abalị ahụ, ọ pụtara n'ihu ụlọ ya ma jụọ ụmụ ya. Di ya nke bu ụzọ emegheghi ya. Ozugbo ọ chọpụtara na ndị nta akụkọ na-akpagbu ya, ọ na-eji ọgwụ nchebe wakpo ha.Nke ahụ bụ oge nke atọ nke ọgwụgwọ ahụ mere, ụlọ ikpe na-akpọ Kevin Federline n'ụlọ mkpọrọ. Onyeikpe nke na-elekọta ịgba alụkwaghịm ahụ nụrụ na ọ bụrụ na ọ gwụchaa oge a, ọ bụrụ na ọ gwụchaa, ọ gaghị enwe olileanya ịnweta ụmụaka na ịgba alụkwaghịm. Ụlọ ọgwụ ahụ hapụrụ 20 mgbe ọ gwọchara ya. March 2007, ma malite ịhapụ onwe ya nye ụmụaka na njikere maka album ọhụrụ.
Na September 2007 malitere ịlụ agha iji chebe ụmụ Sean Preston na Jayden James. Ụlọikpe ahụ nyere ya iwu ka o lee ule maka ọgwụ ọjọọ na ịṅụ mmanya kwa izu.Ụbọchị ole na ole mgbe e mesịrị, a boro ya ebubo ụgbọ ala n'enweghị ikikere ọkwọ ụgbọala wee maa ya egwu na oge ụlọ mkpọrọ.N'ihi ihe a merenụ, ụmụaka Kevin Federline bụ ndị dibu mbụ na-enyefe ya, ebe ọ bụ nanị otu nleta kwa izu ka a na-ahụ, n'okpuru nlekọta.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ laghachiri na ya, nke mbụ ya ghọrọ 1. Mee ka 2007 na House of Blues na San Diego soro ise ọzọ dị na obodo ndị ọzọ. A na-ere ihe niile na nkeji ole na ole.31. N'August, a tọhapụrụ otu onye aha yaGimme Morena egwu telivishọnMTVmara ọkwa taa na ọ ga-ebido MTV Video Music Awards site na otu a. Mgbe ọ na-arụ ọrụ ya, ọ nọ n'ime yaGimme Moreikiri ụkwụ mebiri na o nwere ihe dum show na a gbajiri Now podpatkem.Vystoupení nkatọ na-katọrọ dị ka playback na-abụ abụ maka fọrọ nke nta gbagidere egwú. Mgbe e mesịrị, ọ gosiri na ọ bụ ya ụlọ ọrụ naa amanye secede, ọ bụ ezie na ọ na-adị ya nnọọ njikere maka ya lọghachiri. Jive Records kwere MTV na ọ ga-eme na-enweghị ya maara n'oge ahụ. Britney P. Diddy gwara ya ozi a n'ihu ya n'ihu VMA.
Ọ na-enwekwa ihe ngosi dịgasị iche iche na Chris Angeel bụ onye a ma ama. Ọ ga-apụta na ogbo ma pụọ ​​ma ọ bụ gbaa egwu site na enyo. A ụbọchị ole na ole tupu arụmọrụ, Otú ọ dị, bịara MTV na nkwu hotel onwe ya, ebe show wee ebe, na ọnụ ọgụgụ bụ nnọọ ize ndụ ma na-egosi, n'ihi na mkpuchi nzube, a ikpeazụ-nkeji mgbanwe.
New album n'okpuru ahablackoutbipụtara 30. Octoberna ndị nkatọ ahụ nwere nnukwu ihe ịga nke ọma na-atụghị anya ya, mana ọ kwadoghị album ahụ ma lie ya. Mana na December 2007 wepụtara obere vidiyo vidiyo na-atụghị anya yaNke M, bụ onye nọ n'ihu chaatị.
2008-2010:ọgbọ egwuregwu,Maka ndekọna njemThe Circus Starring: Britney Spears
Britney Spears na Circus Starring: Britney Spears na 2009
Na Jenụwarị, a na-etinye 2008 n'ụlọ ọgwụ maka ọnọdụ uche mgbe ọ na-edebe ụmụ ya n'ụlọ ya ma jụ inye ya di ya.Ma na nke afọ ofufo, ụlọ ọgwụ ahụ hapụrụ ụlọ ọgwụ ahụ mgbe ụbọchị ole na ole laghachikwute ya na February.Ụlọikpe ahụ nyere iwu ka a manye nna ya, Jamie Spears.
Otú ọ dị, mgbe ị lọghachịrị n'ụlọ ọgwụ ahụ, ezumike mere. O kpochara onye njikwa ahụ ma laghachi na onye njikwa mbụ, bụ Larry Rudolph, bụ onye gbanwere isi afọ iri gara aga. Na March, 2008 na-atụghị anya na ọ ga-arụ ọrụ ọrụ na usoro nchịkwa nke USOtú m si zute nne gị. Ihe merenụ mere ka ọ bụrụ ihe kachasị anya na usoro ihe omume niile, ma e depụtara ya kachasị elu na usoro 'akụkọ ihe mere eme.Ya mere, amalitere m ikwu okwu banyere ngwa ngwa ọzọ na sitcom ahụ na-aga nke ọma. Ka ọ dị ugbu a, otu vidiyo vidio na-abụrụ ya nke atọNa-agbaji Ice.
12. Mee ka 2008 bidoOtú m si zute nne gịna dịka ndị na-emepụta usoro ihe omume ọ ga-ekwe omume igwu egwu n'oge ọhụụ.7. September 2008 malitere 2008 MTV Video Music Awards maka oge nke atọ. Ọ nara umu nrite maka video video kacha mma, mma video na vidiyo nke afọ maka obere egwuNke M. Akwụkwọ akụkọ ahụ malitere ịgba égbè n'otu ụbọchị ahụBritney: Maka ndekọ, bụ nke ọ laghachiri n'ihe omume gara aga na ndụ ya.E degharịrị akwụkwọ ahụ na 30. Ọtụtụ nde mmadụ kiriri 2008 na MTV na 5,6. Ihe ngosi nke na-ewere ya na reflectors na ihe karịrị. N'akwụkwọ a, anyị ga-amụta ihe ha na-eche banyere ọdịda ha, akụkụ ha, nakwa ma ọ dị ha ka ha dị njikere iguzo na ogbo n'ihu ọtụtụ nde mmadụ. Ọ bụghị naanị ya na-ede akwụkwọ, kamakwa ndị ezinụlọ ya, onye njikwa na ndị ọrụ ibe ya.
Onyonyo studio nke isii yaọgbọ egwuregwuwepụtara na December 2008. Efere mgbe issuance rigoro n'elu nke US ahịa chaatị dị iche iche, o wee ghọọ nke ọdụdụ artist mpụta mbụ na ise efere na ọtụtụ onye na akwụ ekele ide na Guinness Book of Records.The mbụ otu, achụ nwaanyị, bụ ndị meriri ihu nke US kpọrọ chaatị, ghọrọ ndị mbụ ọtụtụ onye nke ya ọrụ ebe ọ bụ na ya mpụta mbụ otu ... Baby One More Time si 1999. N'otu afọ ahụ, ka merie ndị award maka nnukwu comeback n'akụkọ ihe mere eme na a comeback maka ya inspirational ndụ na ọrụ. N'agbanyeghị na ịgba alụkwaghịm, ọnwụ nke na-elekọta nhọrọ ụmụ ha na echiche uche mmebi, ya comeback gosiri na ya dị ịrịba ama ike. Na January 2009 enwetara nna ya ikike megide ya mbụ na manager Sami Luftimu, bụbu onye Adnan Ghalib na ọka iwu Jon Eardleymu ka ya na ndị ezinụlọ ya na-agbara nso karịa 250 yaadị.Na March, 2009 gara njem a na-akpọ n'ụwa niileThe Circus Starring: Britney Spears, nke natara ọtụtụ nde dollar na ntinye 131 ma bụrụ ebe ọ kachasị nwee ihe ịga nke ọma, ọtụtụ ndị na-eleta ya na ọdụ kachasị mma. N'oge a tọhapụrụ ya, ọ bụ 5. Njegharị 2009 kasị mma, 5. njem kachasị mma nke akụkọ ihe mere eme n'etiti ndị ọbụ abụ na 18. ihe kacha baa uru. Maka nnukwu ihe ịga nke ọma, ọnụ ọgụgụ mbụ nke mmegharị njem ahụ nke arụmọrụ ahụ dara karịrị ihe okpukpu abụọ na 97. N'oge niile, 50 na-eme njem nlegharị anya site na ndị na-agba egwú, ndị ọkachamara, ndị clowns na acrobats. Ihe ngosi 200 niile bịara site na ndị ọrụ 50 gara. Ngwakọta dum nke 60 na-emefu ruru ọtụtụ nde dollar US. Ngwa maka egwu egwu ọ bụla bụ tonnes 34 nke ihe onwunwe nke na-ebu ngụkọta nke ụgbọala XNUMX.
Na November, 2009 wepụtara ya akwụkwọ nke abụọ kachasị buru ibu karịa otu3, nke ghọrọ onye nke atọ n'ime American Billboard Hot 100.Na May, 2010 kwadoro mmekọrịta ya na onye na-elekọta ya bụ Jason Trawick, onye ya na ya kwetara ka ọ kwụsị ọrụ ya, n'ịgbalị ilekwasị ndụ ya anya.N'otu afọ ahụ, onye na-agụ egwú wepụtara akpa uwe ya, na-ejikọta akara nke Candie.
28. September 2010 na-agbasa usoro Fox Stationọṅụ, nke ọ na-egwuri onwe ya. ỤdịBritney / Brittany, nke bụ ụtụ maka ya, ghọrọ 13,3 na ọtụtụ nde ndị kiriri na 4% Fim ndị kacha ele anya na usoro dum.
2011-2012: EraFemle Fatalena ndị juri na American X-Factor
28. March 2011 wepụtara ọhụụ ọhụụ, na usoro nke asaa. A kpọrọ aha yaFemme fatale. Egwú ahụ sitere na album ghọrọ abụNagide ya.
Egwuru egwu a bu nke mbụ na Canada, Belgium, Denmark, New Zealand, na chaatị Billboard. Nke a bụ nke anọ na-alụbeghị di, bụ nke na-ewere ọnọdụ mbụ na chaatị ndị ahụ ma kelee ya na ọ ghọrọ onye na-ese ihe abụọ n'akụkọ ihe mere eme nke jisiri ike ịnwe onye ọkwọ ụgbọ elu n'elu edere ọtụtụ ugboro. Onye na-ese ihe mbụ bụ onye ọrụ Mariah Carey. Na vidiyo vidiyo nke abụ ahụ, kpakpando kpakpando nke sitere n'eluigwe na ụwa na-ada na ụwa na-egwu egwu iji nweta otuto. Ọ ga-aghọ onye a ma ama, ma ọ ga-emesị mee ka ọ ghara ikpochapụ ma bibie ya.
Edeela nnukwu akwụkwọ a niile n'ụwa. Dị ka ndị ọbịa si na ebe nrụọrụ weebụ MTV, e nwere ihe ọbụla MarchFemle Fataleakwụkwọ kacha mma nke afọ 2011.Rolling Stone, otu n'ime magazin egwu kachasị dị egwu na nke kasị dị mkpa, emetụla album ahụ dị ka akwụkwọ kachasị mma ya ugbu a, e nyewokwa ya 4 / 5 ọkwa, nke bụ ọkwa kacha mma ọ natara na magazin a. BritishDigital Nledonyere album ahụ ọbụna 5 / 5, nke bụ, dịka nke gara aga, ọkwa kachasị mma ọ bụla enyerela na ọba Britney. The album na-ememe ncheta British tabloid ndepụtaAnyanwụna ọbụnaPerez Hilton. Foto foto nke album bụ mgbe e mesịrị (2013) nke sitere n'aka Christina Aguilera, bụ onye gbara ya vidiyo vidio n'otu ebe dịka Britney Spears gbara na ihe ọhụụ afọ atọ gara aga.
N'izu ole na ole mgbe onye na-eduzi ụgbọelu kwupụtara na a tọhapụrụ ya nke abụọ, ọ ghọrọRuo Mgbe Ụwa Ga-agwụ, bụ nke onye na-abụ abụ bụ Kesha tinyere. Ọ gwara ya ihe mere o ji dee akwụkwọ a."Echere m onwe m ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ na-agụ egwú, anyị nọ na njem ụwa, anyị nwere ihe magburu onwe ya, chi kpakpando ma anyị achọghị ịga ụra. Anyị ga-achọ ka oge ahụ dịgide ruo ọgwụgwụ nke ụwa, "ọ kọwara. Apocalyptic na-agba egwú vidio si n'obodo ukwu mepere emepe nduzi Ray Kay, onye mere 2 mbipute nke clip.
N'oge ọkọchị, o wepụtara akwụkwọ akụkọ ahụM Am The Femme Fatale. Akwụkwọ akụkọ ahụ na-esote ya mgbe ọ na-akwadebe ịhapụ akwụkwọ nke asaa nke studio yaFemle Fatale. Ihe ngosi ahụ na-enye ihe ntanetị iche iche site na ụlọ ọrụ maka ntaneti vidio kachasị ọhụrụRuo mgbe ụwa ga-agwụ, nyocha, ma, karịa nke niile, nnukwu njegharị na Las Vegas.
N'oge obere njem ahụ, ọ mara na TV na-aga ịmalite njem ọhụrụ yaFemle Fatale. Mgbe mbido iri gara aga, 6,2 na-efu ọtụtụ nde dollar US[isi iyi?].Femme Fatale Tour69 nwetara ọtụtụ nde dollar 11. njem na-enweghị uru nke 2011. Zalda Goco chepụtara ejiji na njem ahụ, ya na Gwen Stefani ma ọ bụ Lady Gaga rụkwara ọrụ. A na-edekwa Femme Fatale njem na DVD na nke 3D. Ihe ndekọ ahụ si na Toronto, bụ ebe e dere ya maka ụbọchị abụọ.
30. August 2011 na Los Angeles n'abalị gara MTV Video Music Awards. N'ime mgbede a, 2 meriri ihe nrite maka egwu egwu kacha mma maka egwu ahụRuo Mgbe Ụwa Ga-agwụ. A kwanyekwara ya ùgwù maka ya, ọ natakwara Michael Jackson Video Vanguard Award ka ọ mara ọrụ ya dị ogologo na nke bara uru. N'ajụjụ ọnụ na MTV News, ọ sịrị na ọ bụ onye na-esote ya na album ahụFemle Fatalega-abụ abụCriminal. Vidio nke otu a na-akpọkwa ya mgbe ahụ ka ọ bụrụ nwa agbọghọ Jason Trawick.
Afọ isii mgbe a tọhapụrụ akpa nchịkọta nhọrọB Na Na Na Nao kpebiri ịmepụta otu ihe ma wepụ yaB na Mix: Achọpụta Mpịakọta. 2. Ebu ụzọ kwuo na abụ ọhụrụ na songs ndị a na-agụghị na mbụ ga-apụta na ndekọ ahụ mana na njedebe ọ dịghị ihe ọhụrụ ọ bụla.
Na 2012, ọ ghọrọ ihu Twister Dance, bụ ebe ọ na-esere mgbasa ozi Ray Kay. Ọ ghọkwara otu n'ime ndị ikpe anọ nke American version nke ihe ngosi X-Factor. O weputara mmanu ogugu ohuru ohuru ya bu Fantasy Twist, Fox kwusara ihe ozo nke Glee, na-asọpụrụ Britney. Britney ghọkwara nwanyị kachasị ụgwọ na ụwa na-enweta 58 nke nde dollar (ọ bụghị gụnyere X Factor). Ihe a na-akpọ Britney 2.0. Ndị na-achị Britney enwebeghị ihe ịga nke ọma, dị ka ihe kacha njọ nke Britney. Ka o sina dị, ọ bụ ihe na-ele 4 anya. usoro nhazi; ihe nkiri 7 460 000 America na-ele anya na nke mbụ ya. Britney kwadokwara album #willpower nke American singer will.i.ama na otuTie mkpu ma tie mkpu. Abụ a bụ #1 na iTunes na 54 mba ụwa ma bụrụ onye mbụ na akụkọ ihe mere eme nwere iTunes na ọtụtụ mba.
2013: New Partner,Britney Jean, Otutona njikọ aka na Las Vegas
Akụkụ a nke isiokwu a enweghị nghọta zuru oke ma nwee ike ịnweta ozi ndị dị mkpa ka ekwenye.
Ọ bụrụ na ị maara isiokwu a, biko nyere aka ịmatakwuo azịza ndị a site na ịtinye aka na isi mmalite nke isi mmalite.
Aha nke ngosi na Las Vegas.
Britney Spears kwadoro 2013 na mmalite nke afọ na ọ na-arụ ọrụ na album 8th studio, nke a ga-ahapụ otu afọ ahụ na mgbụsị akwụkwọ. Ndị òtù Britney gosipụtara ndị na-emepụta dị ka nwa nwa, Elia Blake, Ina Wrolsden, Darkchild, Danja, Sia Furler na will.i.am. N'ihi ọrụ ya na ọba ọhụụ, ọ jụrụ ndị juri na mpaghara ọzọ nke American X-Factor. Onye na-emepụta ihe banyere LA Reid jụkwara òkè X Factor.
12. January 2013 Britney kwadoro ezumike ya na Jason Trawick, onye ya na ya gbara afọ. N'ọnwa Febụwarị, a tọhapụrụ ya na abụ egwuTie mkpu ma tie mkpu.
Na njedebe nke February, Britney gara oriri na nkwonkwo Elton John, bụ ebe ọ bịara na uwe mara mma. O juru m anya na ihe niile bụ agba agba agba Britney - agba aja aja. O gosikwara n'ihu ọha na enyi ọhụrụ ya, David Lucad, onye dị afọ anọ, bụ onye ọrụ ụlọ ọrụ iwu. O zutere ya na nkuzi golf, ọ bụ onye nkụzi na ọ bụ nwata. Ha na-ekwu ozugbo ha lere ibe ha anya. Mgbe obere oge gasịrị, ịkọ nkọ na-apụta na Britney na-ezube inwe nwa na David.
Britney edebanyela aka na nkwekọrịta Las Vegas na Planet Hollywood, bụ nke na-amalite n'oge okpomọkụ nke 2014. Nkwekọrịta ahụ gụnyere nanị izu ụka 8 kwa afọ, nke pụtara na Britney ga-eme nanị ọnwa 2 n'afọ. Nkwekọrịta ahụ na-agụnye ihe mgbakwunye na Britney Spears na-ekere òkè na otu ọdọ mmiri gburugburu obodo ahụ. Ihe ngosi ahụ ga-agbanwe mgbe niile ka ọ ghara ịchọta mmasị na ọnwụnwa malitere na ya na July. Britney kwuru, sị:"Ana m eme ihe n'ezie n'ezie na m na-egosi na Las Vegas. Ịrụ ọrụ agaghị adị mfe. Ọ ga-abụ otu oriri site na mmalite ruo n'isi ma nweta ya, aghaghị m ịdị na-akasị mma ma gaa zuru oke. Enwere m obi uto na ihe nkiri ahụ ga-adabere na nkà na ụzụ kachasị ọhụrụ na ọ ga-abụrịrị ihe dị elu. "Nweghachi nke Planet Hollywood na-efu 20 nde dollar, nke bụ ihe dịka 380 nde. Britney ga-abịa 30 maka ọtụtụ nde dollar, nke fọrọ nke nta ka 580 000 000.
Na April, MNa na pụta ya na nke iri na abụọ senti Island Fantasy, distriubuovaný na Europe na USA, mgbe ahụ, gbara a ọhụrụ photoshoot maka magazine Ọdịdị, pụtara na a azụmahịa maka a baseball otu Dodgers na hà na-akwado ndị na-ekere òkè nke Congo na ememme Wango Tango, gara n'afọ 2011. Ọzọkwa, Brit dere abụ "Ooh La La" maka ihe nkiri Smole, onye gbapụrụ 17. Ike 2013 ma o kwere omume na ọ ga-apụta na ọba ọbụ abụ Britney. Ihe nkiri ahụ nwere mmalite nke 6 na US. July 2013 na Czech Republic 8. 2013 Britney bụ nwa agbọghọ agbụ.
1. Ka (USA 30. April), e nwere pụtara mbụ photos of MNa na gawa na studio na ya e mesịrị gosiri na MNa na malitere Ndekọ songs na ya ọhụrụ, asatọ album, nke, dị ka onyeisi na-emeputa (site will.i.am) kwesịrị ezigbo enyi. Ọ malitekwara ikwu okwu banyere onye a na-akpọ Lady Gaga na Britney, dịka a hụrụ ha abụọ na ụlọ ihe nkiri n'otu ụbọchị ahụ.
Ná mmalite nke May 2013, Britney na-ahọrọ nke abụọ na ndepụta nke ụmụ nwanyị dị iche iche, dị ka magazin Maxim. N'otu oge ahụ, aha abụ Britney ọhụrụ ahụ pụtara, bụ ndị aha ha buru amụma n'onwe ha. 11. May Wango Tango mere. N'ajụjụ ọnụ Maria Lopez gbara, Britney tụlere ọhụụ ọhụrụ ya, usoro aghụghọ ya na agụụ ya maka chocolate. N'ileghachi anya na foto nke nwa nwanyị dị afọ abụọ nke Mary, Britney kwusiri ike na ọ chọrọ nwa ọzọ, na-achọ nwa obere nwa mgbe niile.
17. May wepugara otu Ooh La La na film The Smurfs 2, bụ ndị nwere oké ihe ịga nke ọma na Fans na nke e mesịrị filmed a video clip, gwara site Marc Klasfeld. Ụbọchị abụọ gasịrị a otu asambodo VEVO Chịa & Tie mkpu, nke n'oge nwere nanị ihe karịrị 220 nde echiche na youtube.com. 27. Ike 2013 karịrị Britney Fans na 1 000 000.
Ruo oge Britney enweghị ihe ọmụma ma ọ bụ paparazzi foto. Fans nke MNa na nwekwara passionately speculated banyere ma a otu Ooh La La ga-egosi na German Hot 100 mgbe ya otu, Chịa & Tie mkpu dara.
Mgbe Amanda Bynes malitere inwe nsogbu uche ma kpụọ isi ya, Britney nyeere ya aka imeri oge a, na-akọrọ ya ahụmahụ ya.
9. N'ọnwa June, foto mbụ si na vidiyo gaa otu Ooh La La, nke Marc Klasfeld duziri. Ihe ngosi vidiyo bụ 11. July 2013. 16. June Czech MTV nwekwara aired a show n'abalị MNa na ube, nke e dere akwụkwọ M The Femme Fatale, nke a na ẹdude afọ 2011, 7 ndekọ. ihe nchekwa studio na obere vidiyo maka Till World End and TOP 20 bụ ndị Britney.
Britney aghọwo nke Twister Dance nke ugboro abụọ, nke a bụ Twister Dance Rave. N'otu oge ahụ, a kwadoro mmekorita ya na onye ọbụ abụ bụ Kesha, nke dere, n'etiti ihe ndị ọzọ, otu Till The World End from Britney's album mbụ, Femme Fatale. Britney Spears anọwo na-arụsi ọrụ ike n'iso ndị Twitter na-akparịta ụka, na-eme ka ha dịkwuo ụtọ, dịka ọ bụ otu n'ime kpakpando ole na ole iji mee otú ahụ. Na Monday, onye ọbụ abụ bụ Ooh La La malitere na redio Z100, na-egwu ya n'oge ọ bụla. E kwenyekwara na 8. a ga-ewepụta album ahụ na 2013.
N'oge na-adịghị anya, Britney kwuru na ya chọrọ ịga na njem ụwa na oge ezumike na Las Vegas, ndị agbụrụ na-eti mkpu. Ngwongwo ahia na United States na Europe, gụnyere Czech Republic, malitere site na ire nke otu Ooh La La, nke nwere mmasị dị ukwuu. Ọ malitekwara ịkọwa banyere mmekọrịta Britney na Rihanna na 2011. E nwere akụkọ na Britney dị ime, mana ha niile agbanyela. Mana Britney kwetara na ọ dị ime otu ugboro, ma ọ bụghị. Ọ na-esi n'ihu ọha apụta n'ihu Devid. Ọ nakweere ụmụ ya dị ka ezigbo enyi na-egwuri egwu na Britney bụ nke anyị.
28. June Britney eweputara vidio nke o kwuru, sị:"Ahụrụ m ụmụ okorobịa m niile n'anya!"Na vidio a, Britney kwupụtara onwe ya banyere ndị lụrụ di na nwunye na United States. O dere na Twitter:"Enwere m obi ụtọ ma dị mpako ịnụ mkpebi ahụ."
Ruo ogologo oge, ọ dịghị ihe pụrụ iche mere, Britney rụsiri ọrụ ike na Alba 8. Mgbe ọ pụtara n'ihu ọha ruo oge ụfọdụ, ọ na-enwe obi ụtọ, na-achị ọchị na obi ụtọ. Czech Radio ekweghị itinye Ooh La La n'ime ether maka ihe ndị a na-amaghị. Esisịt ini ke oro ebede, enye ama ese foto ọzọ ka ọ na-aga site n'azụ azụ na studio ndekọ. O meriri mmeri nke album kachasị anya nke afọ, dịka Eminem, Lady Gaga ma ọ bụ Beyonce, na nnyocha nke ihe omume 2013 kasị atụ anya ya. Na nzaghachi a nhoputa a, o zitere ozi na Twitter nke o kelere ndi fan maka nkwado ha."Enwere m oké nrụgide;). Enwere m obi ụtọ na m ga-edite gị akwụkwọ ọhụrụ m ... Enweghị m ike ichere ịkọrọ gị ihe m na-arụ ọrụ na ya. Nke a ga - abụ m onwe m ọbụ abụ ọ bụla - Britney ", o dere.
Ná mmalite nke July, William Orbit, bụ onye na-emepụta Alba 8, dere, sị:"Will.i.am emeela otu n'ime abụ kacha mma ma kacha mma nke Britney! Site n'ụzọ, ọ na-ada ụda na abụ ọhụụ niile! A ga-atọrọ gị! "
6. July abanyewo na Clip maka Nwaanyị 100 000 000 na VEVO wee ghọọ onye na-esote Britney, bụ onye natara akwụkwọ ikike VEVO. Ihe abụọ gara aga bụ M Wanna Go ruo mgbe ụwa zuru, nke natara akwụkwọ na njedebe nke 2012.
N'ọnwa July, a hụkwara Britney na ụmụ ya na ogige ntụrụndụ. Ndị nche nche atọ na-eche ya nche ma enyeghị ndị mmadụ ohere iji foto Britney gbaa foto. Onye ọ bụla amaghị onye kpatara ya.
Onwa onwa 11. July amalitela otu obere vidiyoOoh La La, bụ nke jikwa ụmụ Britney bụ Sean Preston na Jayden James. Na vidiyo vidiyo, Britney na-enweta ihe nkiri vidio site n'ịduzi eriri anwansi Gargamel. Vidio ahụ ezutewo nke ọma; maka awa 24, ọ na-enweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde 4, na 10 otu nde echiche kwa VEVO kwa izu. Foto akpa ule na Las Vegas pụtara. Ekwadoro na Britney bụ n'ezie. 18. July, Europe2 redio mere ka Ooh La La nwee ọganihu. Na njedebe nke ọnwa July, ịkọwapụtara na Britney ga-eme na 2014 Superbowl. Britney 28. N'ọnwa July, ya na ụmụ ya na enyi ya bụ Devid na-eme ihe nkiri Smurf 2. Ọ na-eyi uwe dị iche iche karịa uwe na-acha anụnụ anụnụ na iji aka ya tinye aka na ndị fan. N'etiti ndị ọzọ, a tọhapụrụ CD nke a kpọrọ The Essential Britney Spears.
Akwụkwọ Buzzfeed.co bipụtara 70 ihe mere ndị na-ahụ n'anya ji amasị Britney Spears.N'ọnọdụ ole na ole, ọ na-atụgharị ya - ma ọ bụ karịa ndị agbụrụ ya.
15. Agwaputara August ka Miley Saịrọs bụrụ abụ dịka Britney Spears. Ha malitere ịchọta egwu egwu na ozi ụgha banyere album ya na album Britney. E nwere naanị otu ihe: oge ​​ọhụụ ga-adị ka bọmbụ nuklia. Ọ bụ nke abụọ Na oge mpaghara.
Mgbe nwatakịrị a na-enweghi ihe ịga nke ọma nke August otu Lady Gaga, ọhụụ ọhụrụ pụtara na Twitter;"Biko, Britney, chekwaa pop-music!"Na, dị ka akwụkwọ ya si kwuo, Britney dị njikere maka ya.
19. E wepụsịrị ọrụ weebụ BritneySpears.com na ọrụ August. Kama ịmepụta ihe, ịdọ aka ná ntị pụtara na ihuenyo: Britney Spears; Anya niile na m; Ụbọchị 29. Ndị Fans malitere ịghọgbu onwe ha ma na-arụ ụka banyere ihe na-eme 17. September 2013. Ná ngwụsị nke August, a na-ekpuchi ebe nile nke mmekọrịta netwọk Britney. Ndokwa maka oge ọhụrụ amalitela. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa August bụ aha onye na-anya ụgbọelu; Ọrụ okpu. Vidio maka otu a na-ese onyinyo maka ụbọchị atọ; site na 8. ka 11. Septemba. Aha Miley Cyrus-SMS (Bangerz), nke Britney kwadoro.
Ná mmalite nke September, a mara ọkwa na Britney ga-eme 17.9. na Good Morning America, n'ụbọchị 8 naanị onye pilo. 7. September Britney na Twitter zipụrụ foto mbụ nke igbe nkuku na onye ọkwọ ụgbọala. Ọ na-ele ya anya dị ka nke a na clip clip nke Piece Of Me. Ndị na-agbapụta ozugbo malitere ikwurịta oge Blackout 2.0.
9. September Britney weputara foto nke ya bikini na netwọk mmekọrịta ya, nke e weere na nkwụsịtụ n'etiti eserese vidiyo maka Werk Bitch. Ụwa dum kwuputara ozugbo na otu nke "ochie" Britney bụ azụ. Ndị na-egwu na-ekwukwa na a na-akpọ abụ ahụWerkMkpọ ma ọ bụọrụMkpọchi. will.i.am zaghachiri na Tweet nke onye na-akwado banyere aha ahụ dị aghụghọ, zara, sị:"Na-amasị m Werk bọtịnụ. Kedu ihe dị ka gị? "N'ime 60% nke Fans kwetaraWerk Bitch, ọ bụ ezie na aha aha ahụ ghọrọỌrụ okpu. Na 15 na Sunday. September, ụbọchị tupu premiere otu, leaked na internet demo song. MNa na a song nnọọ okowụt ka ike dị ka electro dịghị onye na-atụ anya na ole na ole Fans ekpe si song ... ma zutere na nnọọ mma nwete music sava na okwu ndị bụ "Ị Betta Work Anụọhịa" aghọwo a-ejikarị okwu n'etiti Britneyinými akwado.
1.10.2013 (2.10 na Czech Republic.) Video wee si na izu hụrụ ihe karịrị 20 000 000 ndị mmadụ. Britney na-alaghachi azụ, oge ọhụrụ amalitela. The nkiri ghọrọ nke abụọ kasị oké ọnụ n'akụkọ ihe mere eme (guzo 6 000 000 dollar, nke bụ Ẹkot banyere 123 000 000 CZK). N'ihu ya, ọ bụ naanị a nkiri na Michael Jackson Chịa eleta nwanne Janet. Ọ bụ otu nde dollar karịa ọnụ. Fans obi ụtọ ọ bụghị ịga na Britneyiného adọta si aru, ma si eziokwu na MNa na na video ọzọ mgbe a ogologo oge ịgba egwú. MNa na bụ nnọọ sexy video, na-eji a ụtarị na B-Army malitere ọzọ iji otu n'ime ọtụtụ nicknames Britneyiných - 2004-ney - nke a mma ịrịba ama. The na-agụ egwú si otu gosikwara na MNa na senti ballad dere na okpukpu na Jason Trawick. Na October, MNa na ama na UK na-akwalite ya album na redio show BBC Breakfast Radio1 na a ole na ole ndị ọzọ na redio na TV okwu show na Alan Carr. Friday 17.10. (On ụbọchị nke ikenye kwuru show) pụta na Europe ahụ ụgbọelu otu Work Anụọhịa.
25. October bụ ihe ndekọ nke Britney Jean na ndị na-agụ egwú netwọk. Britney bụ onye gba ọtọ na ọkara ozu ahụ, a na-ewepụta aha album ahụ n'obi. Mkpuchi 5 kwukwara ihe mkpuchi ahụ. Na November, nke abụọ a na-akpọ Perfume, bụ nke ruo mgbe ahụ bụ onye nchịkwa Larry Rudolph, ndị na-eme ihe na onye isi oche RCA, dị mma. Britney degaara ndị na-ege ya akwụkwọ akwụkwọ ozi ogologo na nke onwe ya mgbe ha na-ebipụta ihe mkpuchi ahụ na ụbọchị ịhapụ ya. Tinyere ihe ndị ọzọ, ọ na-agụ dị ka ndị a:"Ana m ekele gị nke ukwuu maka ịgbaso m n'ụzọ a na maka ikwe ka m mee ihe m hụrụ n'anya ... Enweghị m ike na nke a bụ 8 m ugbu a. album studio na m maara na m ka na-ekwu na ọ bụ m onwe onwe album dị ugbu a, ma ọ bụ eziokwu na m n'ezie mpako nke a na album. Enweela m ọtụtụ afọ n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ kpaliri m ịbanye miri emi ma dee abụ ndị ọ bụla yiri ka ha ga-enwe ike ịmata m. Iso ndị dị ka Sia, William Orbit, ma, n'ezie, Will.I.Am bụ ahụmahụ dị ịtụnanya. Ha gere ntị n'echiche m nile ma nyere ha aka ime ka ha dị ndụ. E nwere ọtụtụ egwu na egwu egwu egwu na album, ma ọ dị mkpa ka m gosipụta ike m, àgwà m na nsogbu m. N'ezie m nwere ụfọdụ ihe ịtụnanya maka gị. "Akwụkwọ ozi ahụ ga - agwụ dị ka ndị a:"Achọrọ m igosi gị saịtị nke Britney Spears. Abụ m onye na-ese ihe, Abụ m mama, Enwere m obi ụtọ. Abụ m enyi gị! Abụ m Britney Jean! "
Ke ufọt ufọt November na internet banyere 7 leaked demos nke songs si abịa album. Otú ọ dị, mgbe awa ole na ole gasịrị, e kpochapụrụ ha niile. The naanị songs na leaked tupu ntọhapụ nke ndị njem, egbuke Morning Star (raara onwe ya nye Britneyiným umu) na Allen, bụ ndị nwere a ọjọọ okwukwe, nke gosikwara otu n'ime ndị na-emepụta. 23. Nov. agụ egwú gara Ụmụaka Hospital of Orange County, ebe ha na-emeso-arịa ọrịa na ụmụ cancer. MNa na were a picture na niile, na-ekesa ahụ media otu, Ooh La La, na e gbara ajụjụ ọnụ site Ryan Seacrest.
Akwụkwọ nke Britney Jean wepụtara 28.11. na Norway, otu ụbọchị gafee Europe na 3. December 2013 na US. Board zutere na mma nakwa dị ka na-adịghị mma nwete si ma Internet music portals na MNa na nnukwu onye ofufe isi na oge agukọta nanị ihe karịrị 33 nde "ndị agha". Nzaghachi kachasị mma dị na abụEnwerela yakaTik Tik Boom. The album bụ nọmba ahụ na mba 36 n'izu mbụ nke ahịa gburugburu ụwa.
Ruo ugbu a, ihe ikpeazụ nke onye ọbụ abụ bụ akwụkwọ itooluotutonyere na 2016. The review saịtị iReport natara nnọọ mma reviews, dị ka na-ede akwụkwọ reviews na-emepụta jisiri itinye oge a ụzọ, na mmetụta, Otú ọ dị, na osisi enweghị believability ma dị ike themes.
2: Britney: Otu n'ime m
4: Circus (egwu)
5: Achọ M Oké Nkume 'N Roll
6: (Ị na-akwusi m) Ọgba aghara
7: Ekwela ka m bụrụ onye ikpe-azu
8: Na mpaghara
9: Otu ụbọchị (m ga-aghọta)
11: Nagide ya
13: Ọ bụrụ U Chọ Amy
14: Kwa oge
15: Ọrụ okpu
16: Nwa nwanyi
17: Abụ m ohu 4 U
18: Mgbe ụfọdụ
20: Gbanyụọ Ice
21: A mụọ gị ime ka ị nwee obi ụtọ
24: Nrọ n'ime njem nrọ
25: Mee oge '
28: Site na Ala nke Obi Mgbu
30: Egwu megide egwu
31: Njem M + M
35: Otu nke m
38: Adịghị m nwa agbọghọ, ọ bụghị ma nwanyị
39: Nchapu (album, Britney Spears)
43: Ekele (abụ, Britney Spears)
44: Ụmụ nwoke (abụ, Britney Spears)
45: Ebube (album, Britney Spears)
46: Ike (abụ, Britney Spears)
49: ... Baby One More Time (song)
MNa na ube, aha MNa na Jean Magdolna (* 2. 1981 December McComb, Mississippi, USA) bụ American pop ọbụ abụ, malite nke Grammy na MTV Video Music Awards, songwriter na omee. Kasị ghọrọ mara maka songs "... Baby One More Time", "Oops! ... I Ndi ya ọzọ", "Nsí Achọ", "Gimme More," "achụ nwaanyị," "Ibe nke Me", "Jide Ọ Against Me" "ruo Ụwa nsọtụ", mba song "Chịa & Tie mkpu" American rapper Will.i.am na-abụ abụ soundtrack na film na Smurfs 2.
Britney / Brittany bụ nke abụọ nke usoro nke abụọ na ihe omume iri abụọ na anọ nke usoro telivishọn America. Edere ma na-eduzi onye edemede nke usoro, Ryan Murphy, na 28 nke mbụ. September 2010 na Fox TV ma nyefee Britney Spears. Member ukwe ,, Brittany Pierce (Heather Morris) ahụmahụ dọkịta ezé mgbe ná Nkụnwụ ịmụ anya arọ nrọ na nke ha na-apụta dị ka Magdolna na ya iconic oge ma na-agbaso ya ọzọ ụfọdụ ndị ọzọ nọ n'ọgbakọ na. Isi-ọbù-abù Rachel (Lea Michele) na Finn (Cory Monteith) na-enwe ná mmekọrịta unu mbụ nsogbu a na chọọchị onye ndú, Will Schuester (Matthew Morrison) ga-ekwo ekworo nke a ọhụrụ enyi izi ndụmọdụ Emma Pillsbury (Jayma Mays), Dr. Carl Howell (John Stamos) .
Britney: Otu n'ime m bụ ọrụ ndụ site na Britney Spears. A na-eme egwuregwu na Planet Hollywood Resort na Casino na Las Vegas, United States of America. Ihe ngosi dum na-egosi ọrụ nke Britney Spears.
Britney Jean bụ akwụkwọ nke asatọ nke studio American Britney Spears. N'ikpeazụ, 3 kwesịrị ịpụta. December 2013 na America mana na Europe ụbọchị ole na ole gara aga na 29. November 2013. Onye na-agụ egwú na album malitere ọrụ site na mmalite nke 2013. Kemgbe afọ ahụ, Britney kwuru okwu dịka ọkpụkpọ onwe ya kachasị. The mbụ otu si album na ọ bụghị ezigbo ihe ịga nke ọma track Work Anụọhịa, ndị na ndibọhọ US gold award nke na-ere ọkara nde mbipụta nke otu. Nwa nke abuo aghọọ egwu egwu. Ebe kachasị mma ya bụ 76. Alba anaghị eme ọtụtụ ihe n'ihi na o nweghi obere nkwado. Ebe kachasị mma Billboard dị na 4, nke kachasị njọ maka album ya maka ọrụ ya dum. A oge tupu album leaked demo songs Njem na ọtụtụ Fans nwere kwuru na vocals na onye ọ bụla nke songs uda dị iche iche, na mgbe e mesịrị onye ẹfiọk "ọzọ" olu ka olu na-agụ egwú Myah Marie, bụ onye a 'ikpe' na-agụ egwú ndabere vocals a album, na mgbe e mesịrị na ọhụrụ releases nke untreated vocals mgbe ntọhapụ gosiri na e nwere ike ịbụ ihe karịrị nnọọ a Jazz vocalist. Olu ya na-egosi ọbụna ebe a na-edeghị aha ya.
Circus nke abụọ site na album Circus nke American singer Britney Spears. Mbido wee banye na TV na January. Akụkụ InfoBritney maka Clip Circus fọrọ nke nta ka ọ gaa n'ụlọ ikpe. O kwuru na ya na-eleda ndị enyí ahụ na-egosi na ọ na-egwu ya. Britney na-agọnahụ na enyí na-anwa, ndị nwe elephant na-agọnahụ ya. N'otu oge ahụ, na vidiyo a, ọ na-akpọsa ísìsì Fantasy ọhụrụ ya.
M hụrụ Rock 'N Roll (Love Rock' N Roll) bụ abụ si na 1975 Anglo-American otu The Arrows. Ha so n'etiti nkume ndị kachasị ama ma jiri abụ na-abụ abụ, karịsịa site na mkpuchi egwu, karịsịa site na Joan Jett na Britney Spears.
(You Drive Me) Crazy bụ nke atọ song Britney Spears si na album mbụ ya ... Baby One More Time. A tọhapụrụ abụ ahụ n'oge nkeji iri atọ nke 1999 ma mesịa mejupụta na Bestest Hits: My Prerogative's biggest hits album.
Ekwela Ka Mbụ Ikpeazụ Ịmata bụ abụ nke anọ na nke ikpeazụ nke abụọ Oops album ... I Did It Again Onye America bụ onye ọbụ abụ bụ Britney Spears, bụ onye bịara na nkeji iri na ise nke 2001.
Na Mpaghara bụ nke anọ studio nke Britney Spears nke 18 wepụtara. November 2003. N'akwụkwọ a, ọ laghachiri na pop elite na Everytime na Toxic, nke nwekwara na ọkwa America. Na Mpaghara, olu nke Britney Spears dịtụ iche na albums ndị mbụ ... Baby One More Time, Oops! ... I Did It Again Again Britney.
Otu ụbọchị (m ga-aghọta) One (ịghọta) a song site MNa na Magdolna wepụtara n'oge atọ nkeji iri na ise nke afọ 2005.Informace písniSong MNa na dere izu abụọ tupu ọ mụtara ya banyere ime na ya akpa nwa, Sean Preston. Egwú nile nke Spears dere onwe ya na piano, Guy Sigsworth, onye mepụtara kwa oge, mepụtara ọrụ ahụ.
Britney 2.0 bụ egwuregwu dị egwu nke usoro ihe omume telivishọn America. O nwere abụ asatọ sitere na ihe omume nke anọ nke otu aha ahụ, nke bụ ọrụ nke abụọ nyere onye ọbụ abụ Britney Spears. A na-agụnye EP na abụ isii na abụọ mashups nke Spears songs, site na ya album mbụ ... Baby One More Oge ya nke asaa studio album Femme Fatale. E wepụtara EP naanị na nkeji.
Jide ya na m bụ abụ nke American pop singer Britney Spears. Nke a abughi egwu nke abia nke asaa. Ọ bụ Dr. Luke na Max Martin. Egwuru egwu a bu nke mbụ na Canada, Belgium, Denmark, New Zealand, na chaatị Billboard. Nke a bụ na-ama nke-anọ otu MNa na ube, onye ozugbo nwere n'elu nke chaatị dị iche iche na ekele na-agụ egwú ghọrọ nke abụọ artist n'akụkọ ihe mere eme jisiri na-edu ndú otu na n'elu nke chaatị dị iche iche ọtụtụ ugboro. Onye na-ese ihe mbụ bụ onye ọrụ Mariah Carey.
Britney nwere ike ịbụ: Britney Spears, onye na-abụ abụ SingerBritney (album), 2001Britney: Maka ndekọ, akwụkwọ sitere na 2008
Ọ bụrụ na ị Chọta Amy (Onye ọ bụla na-achọ Amy) bụ abụ nke atọ site n'akwụkwọ abụ bụ onye na-akpọ Circus singer Britney Spears. Ọ bụ 10 wepụtara abụ ahụ. March 2009.Videoklip
Oge ọ bụla abụ abụ nke edere Britney Spears dere ma tọhapụ ya. Singl pụtara na ọba egwu ya nke a na-akpọ Na mpaghara.Videoclip Director David LaChapelle mere vidiyo vidiyo nke ọma maka abụ a. Na mbụ, mbipute a na-agbasaghị, Britney Spears kwesịrị ịkagbu ọgwụ, ṅụọ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya, ma nwụọ nke nnyefere. Ma mkpesa ndị fans na ndị ọha na eze mere ka ọ nwee ike ịmepụta nke abụọ ọzọ. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere ndị njem abụọ, United States dị ntakịrị ala karịa ụwa dara ogbenye, ọ dịkwa obere ọbara na ya.
"Ọrụ Bitch" bụ onye ọbụ abụ bụ singer Britney Spears si na album studio asatọ "Britney Jean". Onye edemede na onye ọbụ abụ nke Britney na-egwu otu. Abụ a nyere aka dee ma mepụta onye na-emepụta ihe na American na onye Black Eyed Peas, will.i.am. Okpukpọ ọrụ agbapụwala 15 na ịntanetị. September 2013 ma ya mere Britney kpebiri imepụta redio redio n'otu ụbọchị ahụ. Edere edere na VEVO obere nkeji mgbe ebido redio. Na iTunes, otu dị na 16. September 2013. Awa ole na ole mgbe a tọhapụrụ ya, ndị otu na-eto eto ruru n'elu iTunes na mba 40.
Womanizer bụ onye na-anya ụgbọelu nke Britney Spears 'isii, bụ Circus, nke a tọhapụrụ na September 2008. Nwa nwanyi a kwughachiri nke oma nke onye mbu nke ogwu a ... Baby One More Time.
Abụ m ohu 4 U (Abụ m ohu maka gị) bụ Britney Spears nke mbụ Britney Spears. A tọhapụrụ abụ a n'oge nkeji atọ nke afọ 2001. A na-ewere abụ a dị ka ọgbọ ọzọ nke mmepe nke onye ọbụ abụ a, n'ihi na ọ na-agagharị gburugburu oge R & B. Vidio ahụ na-emekwa ka Britney dịtụ anya ma kpochapụ ya onyinyo nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke na nwata nwanyị ọzọ.
Mgbe ụfọdụ, abụ abụ nke abụọ nke onye ọbụ abụ America bụ Britney Spears si na album mbụ ya ... Baby One More Time.Information about songNwapụtara abụ ahụ n'oge nkeji nke abụọ nke 1999. Edere na Jorgen Elofsson dere ya, bụ onye natara onyinye BMI maka abụ a na 2000 na nke kachasị mma nke Abụ nke Afọ.
Oops! ... I Ndi Ọ Ọzọ (Oops, m mere ya ọzọ) bụ nke mbụ song si na otu album American MNa na ube, onye pụtara na 2000.Informace písniPíseň dere na-emepụta site Max Martin na Rami. Egwú egwu a ga-egosi mpaghara dị egwu nke Britney site na ụzọ o nwere enyi nwoke ọ na-egwu. Abụ a bụ otu n'ime ihe kachasị ama nke ọbụ abụ a ma ghọọ otu n'ime ọrụ ya kachasị mma.
Agbawa Ice bụ 3. otu site na 5. nke studio album Blackout of American pop singer Britney Spears. Na March, a tọhapụrụ vidiyo vidio, ọtụtụ ndị na-agbapụ anaghị ezobe egwu ha. Ọ bụghị Britney na-akpọ ya, dị ka anyị na-emebu, kama ọ na-eme ka ọ dị mma, bụ nke na-alụso ihe ọjọọ ọgụ.
A mụọ gị ime ka ị nwee obi ụtọ bụ nke anọ Britney Spears song site na mmalite ya ... Baby One More Time. E wepụtara abụ a na Europe na Canada n'oge nke anọ nke 1999.
Britney 2.0 bụ ihe nke abụọ nke usoro nke anọ nke usoro ihe nkiri telivishọn nke American na Glee nakwa na mkpokọta iri na isii nke usoro ahụ. Brad Falchuk dere ya, nke Alfonso Gomez-Rejon duziri, e debekwara ya na United States na 20. September 2012 na Fox TV. Nke a bụ ihe omume nke abụọ a ga-eme ememe dịka ụtụ maka Britney Spears. N'ime ihe omume, kpakpando pụrụ iche Kate Hudson dị ka Cassandra July, Onye Nkụzi Na-ahụ Maka Ọkụ Rachel.
Ihe a na-eme na abụ bụ abụ nke American Britney Spears, bụ nke a tọhapụrụ dị ka nke abụọ nke ụbụrụ nke atọ a na-akpọ Britney. E wepụtara abụ ahụ n'oge nkeji iri na ise nke 2002.
Nrọ na Nlegharị Nrọ bụ njem nleta nke atọ nke ọbụ abụ bụ Britney Spears. Ọ bụ nkwado nke atọ studio album, Britney. 1 malitere. November 2001 wee kwusi na 28. July 2002. A na-eme njem ahụ na North America ma naanị otu ngosi gosiri Asia na Japan.
Ime Somethin '(eme ihe) bụ a song MNa na ube, bụ onye bịara na-kacha mma album Kasịnụ Hits: My Prerogative.VideoklipRežie a clip ga-premiere were MNa na onwe ya, ma na-enyere ị na-dị nnọọ ka mma na-agba onye ọzọ nwere ahụmahụ, na Billie Woodruffa.V A na-eme ihe ngosi ahụ na ndị ịgba egwu ndị ọzọ. Britney na-apụta na clip na mbara igwe, na osisi, na mmanya ma na-aga n'azụ igwe okwu. Na December 2005 ka a tọhapụrụ dịka isiokwu kachasị njọ nke afọ ahụ, na - eme Britney ugboro atọ na ọrụ.
M Wanna Go nke atọ site na Femme Fatale album nke American singer Britney Spears. Ọ bụ 13 wepụtara abụ ahụ. June 2011. Ọ bụ Max Martin, Shellback mepụtara ya.
Ngwá egwu bụ abụ nke Britney Spears si na ya na-anọ abụ, Na mpaghara, nke natara Grammy Awards mara mma. The song e wepụtara ke akpa nkeji iri na ise nke afọ 2004.Informace písniPíseň emepụta The Bloodshy na Avant, onye kọwara song dị ka James Bond gafere na Bollywood filmem.Píseň bụ banyere-ada na ịhụnanya, mgbe anyị chere na anyị na ide a aja, na na ịhụnanya bụ anyị ọgwụ. nke nwere mmetụta dị ka sịga ma ọ bụ alkohol.VideoklipRežie clip were Joseph Kahn, ma script onwe ya clip mepụtakwara MNa na na n'etiti ndị kasị oké ọnụ music videos historie.Klip amalite na ụgbọelu, ebe MNa na-arụ ọrụ dị ka a ụgbọ elu na-eje ozi. Ụlọ mposi osobo nwoke meworo okenye na-amalite susuo ya ọnụ, mgbe a mgbe ọ na-akwusila nkpuchi na steals n'akpa uwe ya klíč.Část mgbe MNa na nwere red ntutu na akpụkpọ anụ uwe gbara ke n'okporo ámá ndị Paris. Oge a, Britney nọ n'ọnọdụ egwu na-enweghị atụ ma nwee ike ijikwa ọkụ na ọtụtụ nchekwa.
Site na Ala nke My Broken Heart bụ nke ise na nke ikpeazụ nke a tọhapụrụ na album mbụ nke Britney Spears ... Baby One More Time. E wepụtara 15. December 1999 dị n'Australia na USA, emesia na Jenụwarị 2000 nakwa na Czech Republic.
Oops! ... I Did It Again is the second album of American singer Britney Spears. 16 tọhapụrụ album ahụ. Ike 2000 wee nwee ọganihu ọzọ. Ọbụna ndị nkatọ na-egwu egwú malitere ịmalite igosi egwu nke Britney Spears music, ya mere nyocha ndị dị na ọba a bụ ihe kacha mma.
M megide Music bụ abụ mbụ nke Britney Spears 'song Na Mpaghara. E wepụtara abụ ahụ n'oge nke anọ nke 2003. Britney bụrụ abụ a na Madonna.
Njem M + M bụ njem nleta nke ise nke onye ọbụ abụ bụ Britney Spears. A na-eme usoro egwuregwu isii naanị na klọb ndị US. 1 malitere. Mee 2007 wee kwusi na 20. Mee 2007. Ihe ngosi ahụ mere nanị 12-16 nkeji na Britney bụrụ abụ na nzaghachi na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịgba egwú. A na-ere ihe nkiri ahụ na nkeji, ma ọ bụghị ya, a katọrọ ya n'ụzọ na-ezighi ezi.
My Prerogative bụ Britney Spears song ọ bipụtara na 2004. Ọ bụ Bobby Brown dere abụ ahụ mbụ. Jake Nava na-enye JideoklipKlip ntụziaka na e nwere agbamakwụkwọ na ya emesia di Kevin Federlin. Oge vidio ahụ bụ oge ọzọ ka magazin Rolling Stone dị oke egwu nke Britney dị ka Mpekere kachasị mma nke afọ 2004. N'ụzọ doro anya, ihe nkesa Muchmusic kwuru na vidiyo a kachasị njọ n'otu afọ ahụ.
Onyx Hotel Tour bụ njem nke anọ nke onye ọbụ abụ bụ Britney Spears. Ọ bụ na-akwado ya nke anọ studio album Na mpaghara. 2 malitere. March 2004 na 6 ga-agwụ. June 2004, n'ihi na Britney na-egbu egbu mgbe ọ na-agbapụ vidiyo na Iwe. A ghaghị igbochi ọrụ 37 na North America. Njem ahụ mere na North America na mgbe ahụ na Europe.
Ihe egwu bụ abụ nke anọ na nke ikpeazụ nke na mpaghara ọba mpaghara, nke Britney Spears na-akpọ. E wepụtara otu ahụ n'oge nkeji nke atọ nke 2004. Ama gbasara egwu ahụ bụ nke onye R & B a ma ama bụ R. Kelly dere, nke anyị nwere ike ịnụ na olu nke abụ a. Ihe edere nke abụ a chọrọ ka e dee ya na Britney na ihe ọ bụla o mere bụ ihe jọgburu onwe ya.
Otu nke m bụ onye ọbụ abụ nke abụọ nke Britney Spears si na 5 ya. foto studio Blackout. E wepụtara onye na-abụ abụ na January 2008.VideoklipVideo ka a gbagburu song 27. na 28. November na Hollywood Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Social Hollywood ma na-ese vidiyo na-efu 500 000 $. Onye nduzi nke vidiyo bụ Wayne Isham, onye ya na Britney na-arụkọ ọrụ na mbụ ya na mberede, abụghị m nwa agbọghọ, ọ bụghị ma nwanyị. Vidio ahụ nwere nanị premiere nke 14. December na MTV.
The okwu ọgbọ egwuregwu nwere ọtụtụ pụtara: ọgbọ egwuregwu (ochie egwuregwu) - Roman sportovištěcirkus - awagharị awagharị, ntụrụndụ podnikMoták (genus) - Marsh, a genus nke Udele na ezinụlọ jestřábovitýchCircus - na English obodo square gburugburu tvaruOxford ọgbọ egwuregwu - na LondýněPiccadilly ọgbọ egwuregwu - na Londýněnázvy art dělCircus (album MNa na Magdolna) - MNa na SpearsCircus album (song) - MNa na song SpearsPsycho ọgbọ egwuregwu - Kiss album nke afọ 1998Circus Live - album musician John Cale nke okwu 2007podobná
Gimme More bụ onye na-anya ụgbọelu site n'ikike ise nke studio Blackout site Britney Spears, bụ onye a tọhapụrụ na September 2007. Singl mepụtara Danja na ọ bụ abụ nke abụọ kasị nwee ọganihu Britney Spears nke egwu ... Baby One More Time.
Adịghị m nwa agbọghọ, ọ bụghị ma nwanyị, bụ abụ nke atọ Britney Spears nke Britney Spears wepụtara. E wepụtara abụ ahụ na nkeji iri na ise nke 2002.
Blackout bụ akwụkwọ nke ise nke studio onye America bụ Britney Spears. 29 tọhapụrụ album ahụ. October na Europe na 30. October 2007 na USA. Ọ bụ ya mbụ studio album nwere ihe ọhụrụ ebe ọ bụ na album Na mpaghara na 2003.
Circus bụ nke isii studio album nke onye America na-abụ abụ Britney Spears. 28 bu ụzọ pụta. November 2008 labelụ naa Records na izu mgbe Magdolna-eme ememe ya ụbọchị ọmụmụ. The album bụ Nchikota electropop na style nke gara aga album blackout. E nyere ya na-nti nwale site music nkatọ, na mgbe a tọhapụsịrị e nyere na mbụ rung German 200 - Magdolna ghọrọ ntà na-agụ egwú na akụkọ ihe mere eme onye 5 album e họọrọ mbụ ebe chaatị dị iche iche, ya mere, o denyere aha ya n'ime Guinness Book of Records.
Femme Fatale bụ nke asaa studio album nke American singer Britney Spears, wepụtara na 25. March 2011. Femme Fatale abanyela n'elu chaatị ndị ahụ, na-eme Britney Spears n'usoro ya na Janet Jackson na Mariah Carey, bụ ndị na-ese foto kachasị elu na United States. Dị ka MTV website ọbịa, na Femme Fatale album bụ album kacha mma nke afọ 2011.
The Circus Starring: Britney Spears (a na-akpọkarị Circus Tour naanị) bụ njem nke isii nke Britney Spears. Ejiri 2009 kwadoro ya nke isii studio studio, Circus. Njem ahụ malitere na March 2009, n'oge March-May, 37 rụrụ na US na Canada. Nke abụọ bụ 2009 na Europe (22 concerts) n'oge June na July, na 24 na-egosi na United States na Canada dị na August na Septemba. Egwuregwu 14 dị n'Australia mezuru na November 2009. Nke a bụ nke ise nke njem 2009 kasị baa uru n'afọ, ahịa zuru ezu nke 135 nde dollar. A na-ere ngosi na Madison Square Garden maka 8 sekọnd.
Uche bụ abụ nke abụọ sitere na nke abụọ nke Britney Spears. A tọhapụrụ abụ ahụ na pasent nke atọ nke 2000.Information banyere abụ ahụ bụ Max Martin na Rami dere egwu ahụ. Ihe odide a bu banyere onye omeewu nke yiri onye nwere obi uto n'ihi na o nwere ego, ebube, mma, ma o bu n'ezie n'eziokwu.
Ụmụaka bụ abụ ikpeazụ nke Britney Spears site na ọkpụkpọ egwu nke atọ ya bụ Britney. The song e wepụtara n'oge atọ nkeji iri na ise nke afọ 2002.Informace písniPíseň dere na-emepụta site The Neptunes na e wepụtara na remixed ụdị, na-abụ abụ na MNa na na a so The Neptunes Pharrell Williams. Egwú ahụ dịkwa na Austin Powers.
Otuto bụ akwụkwọ itoolu nke studio nke onye ọbụ abụ bụ Britney Spears. E wepụtara 26. August nke afọ 2016 (RCA Records). Onye mbụ si na album "Mee M ...", nke bụ akụkụ nke G-Eazy, ka 15 malitere. July 2016. The album na-apụta na nsụgharị pụrụ iche nke ise songs ọzọ ga-akwado.
Ike bụ abụ nke abụọ site na album Oops ... I Did It Again American singer Britney Spears. A tọhapụrụ abụ a n'oge nke anọ nke 2000. Ihe omuma banyere abụ ahụ edere ma mepụtara ndị ọkàikpe nke American Max Martin na Rami nke a. Egwu a na-abụ abụ banyere ịbịarịa ọdụm na mmekọrịta na azọrọ na ike karịa n'oge.
"Ooh La La" bụ abụ abụ nke onye ọbụ abụ bụ Britney Spears dere. Abụ a sitere na ihe nkiri 2013 Smurf 2 ezinụlọ. Edere site na ndị dere ihe dị ka Max Martin, bụ onye ya na Britney na-arụkọ ọrụ na mmalite afọ. Ọ bụ ezie na a tọhapụrụ nsụgharị ngosi ahụ izu ole na ole tutu a tọhapụ gị, 17 hapụrụ ya. June 2013 na redio FM KIIS, bụ ebe Britney nyere ajụjụ ọnụ ọ bụghị naanị maka abụ ọhụrụ kamakwa banyere album na-abia na Las Vegas. 11.7 wee pụta. 2013, na ụbọchị abụọ ọ nwere karịa 7 nke ọtụtụ nde anya.
Britney bu akwukwo nke ato nke American Pop singer Britney Spears nke 6 weputara. November 2001. Egwu ole na ole site na ọba a pụtara na onye na-agụ egwú nke a na-akpọ Crossroads. Britney album nwere ihe ịga nke oma, ma o ruteghi n'akwukwo akuko abuo gara aga ... Baby One More Time and Oops! ... I Did It Again.
... Baby One More Time bụ egwú mbụ nke American pop singer Britney Spears bụ onye wepụtara ya na mbụ ndekọ na-aha otu aha na nke anọ nke iri anọ nke 1998.